Galbeedka Seattle - Seattle Traffic
Socod iyo Rucleyn
Baaskiil iyo Mooto
Faanka la wada raaco
Nabad u Wado
Tilmaamo aad ku tageyso,kaga soo noqoneyso, iyo ku dhex mareyso West Seattle
Tilmaamahan onleenka ah si caadi ah ayaa loogu soo kordhiyaa habab lagu tago, looga yimaado, iyo lagu dhex maro jasiirad u egta West Seattle xilliga buundadu xiran tahay. Socod, baaskiileyn, qaadashada bas, wadaraacidda — ama beddelaadda socodkaaga si aad u joogto xaafadda ama aad u socdaasho xilliga shaqadu yar tahay—dhamaantood waa habab dadku ku tegi karaan meelaha gacanna uga geysanayaan saameynta bulshada deggan hareeraha jidadka waaweyn.
Maababka iyo Ilaha
Qorsheyso Jidka aad Mareyso
Ku Noolow Waddooyin Caafimaad
Warar: Joogsi bas cusub ayaa laga furay Seattle Waterfront
Muuqaal gaaban oo ku saabsan isticmaalka gaadiidka Galbeedka Seattle
Rideshare Dheeraada oo la Heli Karo
muuqaal gaaban oo ku saabsan wadaaga baska West Seattle
Labada Bilood Hore waa Lacag La’aan
Su’aal ma qabtaa?
Booqo boggeena Su’aalaha inta badan la is weydiiyo.
Laga soo bilaabo baabuurta la waadga oo habaysan ilaa gaadiidka dadweynaha, dhallinyaraduna waxay leeyihiin doorashooyin sidoo kale!
Hel $25 oo lagu gadan karo safarro bilaash ah!